को "मेगाफन" नेटवर्कमा जडान गर्दा तिनीहरूका सेवाहरू केही प्रयास गर्न यसको ग्राहकहरु प्रदान गर्दछ। यो, पाठ्यक्रम, त्यहाँ एसएमएस-सूचना को एक किसिम हो। तर आफ्नो जडान दिन एक अपेक्षाकृत ठूलो संख्या प्रवेश देखि, सदस्यहरू बहुमत सुरक्षित यसको बारेमा बिर्सन्छन्। फलस्वरूप, एक बेला पछि तिनीहरूले धन खाता बाट कटौती गर्दै याद गर्न सुरु, र के - अस्पष्ट छ। र, को पाठ्यक्रम, यो मामला मा, ग्राहकहरु मद्दत डेस्क वा खोल्दै हुनुहुन्छ कार्यालय "मेघाफोन।"
पाठ्यक्रम को सेवा, असक्षम, अनुरोध सदस्य सम्बोधन मा उत्पादन। मात्र आफ्नो देखाउन आवश्यक पासपोर्ट विवरण। तर यदि पासपोर्ट तिनीहरूलाई संग, सलाहकार आफ्नो आफ्नै यात्रा सेवा "मेघाफोन" कसरी बनाउने विस्तार भन्नेछु गर्दा हो। निस्सन्देह, तिनीहरूलाई को प्रत्येक आउटएज को आफ्नो संस्करण छ, तर त्यहाँ एक विश्वव्यापी तरिका हो। तथापि, सुरु गर्न, यो मनमोहक के सेवा जडित थाहा छ।
यो प्रयोग सेवाहरू सेवा गाइड गर्न सबैभन्दा सुविधाजनक तरिका हो। प्रणाली पूर्वनिर्धारित आत्म-सेवा जडान, तर तपाईं एसएमएस पाठ "00" संग नम्बर 000105. हेर्नुहोस् रोचक जानकारी खण्ड मा सेवाहरू "मेघाफोन" पठाउन विच्छेद गर्न आवश्यक पासवर्ड "विकल्प, सेवा र शुल्क," "फर्वार्ड र कल छोडेर कल" प्राप्त गर्न र "थप सेवाहरू"। वास्तवमा, घर, एक-स्पर्श कुञ्जीहरू मा रहन, तपाईं हेर्न र उपलब्ध सेवा र आवश्यक जडान र अनावश्यक असक्षम।
तर, कहिलेकाहीं अझै पनि हुन्छ, र यति भनेर असक्षम सेवाहरू "मेगाफन" पैसा बचत गर्न इच्छा संग जोडिएको छ छैन। अक्सर यस्तो अनुरोध आमाबाबुले अनुपयुक्त सामग्रीबाट आफ्ना छोराछोरीको सुरक्षा चाहने खोल्दै हुनुहुन्छ। यो अवश्य, गरेको सकिँदैन, एउटै सेवा पुस्तिका को मद्दतले कार्यालय वा सम्पर्क केन्द्र सम्पर्क गरेर। तर तपाईं गर्न सक्छन्, तपाईंले गल्ति साइटहरू भ्रमण वयस्क विषयवस्तुहरू बाल सुरक्षा गर्न चाहनुहुन्छ भने नम्बर 0500914. एउटा खाली एसएमएस पठाएर, तपाईं "बाल अनलाइन" प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जब यो सेवा पूर्ण निःशुल्क छ, र तपाईं USSD * 522 # मार्फत जडान गर्न सक्नुहुन्छ।
सबैभन्दा ग्राहकहरु पनि अवस्था, बन्द लिखित को उल्लेख मा बुझ्दैनन् लाइसेन्स शुल्क तुरुन्त बनाउन आग्रह यात्रा भुक्तानी सेवाहरू "मेघाफोन"। तर यो सधैं जायज छैन। तिनीहरूलाई थुप्रै तपाईं कल र एसएमएस पैसा बचत गर्न अनुमति दिन्छ। त्यसैले, यो पहिलो सबै फाइदा र जडान विकल्प बुरा मूल्याङ्कन गर्न मनमोहक छ। तपाईं कार्यालय वा कल सेन्टर मा के गर्न परामर्शदाता अनुरोध गर्न सक्छ, तर तपाईं गर्न सक्छन्। यसो गर्न, तपाईं गत महिना लागि सेवा गाइड मार्फत विवरण कल आदेश गर्न आवश्यक छ। यो डाटा प्रयोग गरेर छुट र छुट र मासिक शुल्क बिना कल को लागत तुलना गर्नुहोस्। फलस्वरूप सदस्य कालो रहिरहन्छ भने, त्यसपछि अर्थमा बनाउन गर्दैन यो सेवा असक्षम।
जडित सेवाहरू विज्ञापन सन्देशहरू प्राप्त गरेपछि अक्सर धेरै सदस्यहरू, र त्यसपछि यसको बारेमा बिर्सन्छन्। फलस्वरूप, तिनीहरूले खाता बाट पैसा बस गायब ठान्छन्। तर उजुरी अघि, यो सबै भन्दा राम्रो एक विवरण को लागि आफ्नो अपरेटर सम्पर्क छ। पक्कै पनि सबै हराइरहेको पैसा फेला गरिनेछ, र पनि सेवा असक्षम "मेघाफोन" आवश्यक छैन। आखिर, तिनीहरू सबै भन्दा ग्राहकहरु को सुविधा को लागि विशेष आविष्कार।
सबै तरिका: म कसरी थाह मेरो फोन नम्बर
कसरी आफ्नो कोठा गर्न 900 मार्फत फोनमा पैसा राख्न?
"बीलाईन", सम्पर्क केन्द्र। सम्पर्क केन्द्र "बीलाईन" कल कसरी?
हरियो आँखा लागि मेकअप कसरी बनाउने
कम्प्युटर नेटवर्क को टोपोलजी
Violets: को violets कसरी पानी, replant र तिनीहरूलाई हेरचाह
Viagra - को उपचार को लागि पाटी ...
लाभ र हानि खाता - उदाहरणका। रिपोर्ट पूरा गर्नको लागि निर्देशन। वित्तीय परिणाम मा रिपोर्ट (फारम नम्बर 2)